Thola amadolobha amahle kakhulu ogwini lwasePortugal | Bezzia
Imizana ebukekayo ogwini lwasePortugal
USusana Garcia | 19/05/2021 10:00 | Indlela yokuphila, travel
IPortugal izwe elinentelezi eningi, ngamasiko amangalisayo kanye namakhilomitha amaningi asogwini okwenza kube ngenye yezindawo ezinhle kakhulu zokuchitha ihlobo. Kunezindawo ezisogwini ezithandwa kakhulu, njengaleyo ese-Algarve, kepha kuningi ongakuthola, njengogu olusenyakatho namadolobha alo afana ncamashi nalawo aseGalicia noma indawo emaphakathi, lapho sesivele sibona khona izivakashi futhi izindawo ezaziwayo.
Sizobona amanye amadolobha amahle esingavakashela kuwo uma sihamba ngasogwini lwasePutukezi. Lolu ugu lunokuningi ukubona futhi ukuthatha idrayivu kulo kungumqondo omuhle. Ngolunye lohambo oluhle kakhulu olungenziwa ePortugal.
2 I-Póvoa de Varzim
4 I-Figueira da Foz
IViana do Castelo ingenye yezindawo ezinkulu ongazivakashela ogwini olusenyakatho lwamaPutukezi. Leli dolobha elincane linolwandle kodwa futhi linezindawo eziningi zokubona. Ngaphezulu kwe- intaba singabona isonto laseSanta Luzia, isakhiwo esihlukile esineplani eyisikwele enemibono emangalisayo yolwandle nedolobha. Uma usedolobheni, ungaya ethekwini ukubona umkhumbi waseGil Eanes, umkhumbi wasesibhedlela esidala lapho ungabona khona ifenisha abayisebenzisile. EViana do Castelo singavakashela nomnyuziyamu oneshokoledi.
I-Póvoa de Varzim
Leli dolobha elincane lisendaweni yasePorto futhi phambilini bekuyindawo ebekelwe ukudoba. Edolobheni singabona enye yezinqaba ezivamile ezisenyakatho, ezaziwayo njengenqaba yeNossa Senhora de Conceiçao. Elinye lamaphoyinti angabonakala yi-Iglesia da Lapa, encane kodwa enobuhle obuningi. Eduzane nenqaba sibona itshe lesikhumbuzo lowesifazane odobayo. Lesi sabantu namuhla sinokuvakasha okuningi ngenxa yamabhishi aso.
Labantu Aveiro is eyaziwa njengeVenice yasePutukezi ngemisele yayo, ezazisetshenziselwa ezentengiselwano esikhathini esedlule. IMoliceiros yizikebhe ezimibalabala kangangoba kulezi zinsuku zijabulisa izivakashi ngokuzihambisa ngemisele. Idolobhana linezigcawu ezinhle ezingaphambili. Futhi singabona iMyuziyamu yase-Aveiro etholakala eConvent of Jesus naseCatedral da Sé de Aveiro. Kule ndawo, akufanele uphuthelwe amabhishi aseCosta Nova naseBarra beach.
I-Figueira da Foz
Lesi ngesinye sezindawo eziheha kakhulu ogwini lwasePortugal. I-Figueira da Foz inamabhishi amahle futhi abanzi njengo-praia da Caridade. Kule ndawo singabona futhi ezinye izinqaba ezifana neBuarcos neSanta Catarina. Maphakathi nedolobha kukhona isigodlo seMeya yaseSotto, isitayela saseFrance nezingadi ezinhle. Ikhasino elinye lamaphuzu alo abalulekile aheha izivakashi eziningi.
Leli elinye idolobhana elibukekayo okufanele ulivakashele. Emakethe kamasipala singabona zonke izinhlobo zokudla kanti ingadi yeVisconde da luz iyindawo yokuhamba maphakathi nedolobha. I- ukuhambela phambili kanye namabhishi da Rainha noma da Ribeira ngamaphuzu athakazelisa kakhulu. Kumele futhi silahleke edolobheni laso elidala futhi sibone, ngokwesibonelo, iSeixas Palace noma inqaba yakudala.
La Inani labantu baseLagos lisendaweni yase-Algarve, eningizimu yePortugal. Lesi ngesinye sezindawo eziheha kakhulu ePortugal. Amawa asePonta da Piedade mahle kakhulu futhi anendawo yemvelo okumele ibonwe. Kule ndawo kukhona neMeya Praia, elinye lamabhishi alo amakhulu.
Indlela ephelele ye-athikili: Bezzia » Indlela yokuphila » Imizana ebukekayo ogwini lwasePortugal
Amaqhinga okuthola i-tan enempilo
Ungaba kanjani nempilo enhle yonyawo